izingane Unyaka ubudala yibona namdlandla ekubusweni ezandleni abazali edonsa amabhodlela yabo. Ngakho izingane banganikeza ngokuphepha izinkomishi sippy nge straws. Bajabulela omkhulu ngisho olindele kunazo chubby mfanyana. A ifomu elula inkomishi Element kanye izibambo uzobe kuyancomeka abazali ingane. Ngaphezu kwalokho, ingane uyakusutha nalokho buya "kwabantu abaningi abadala abavuthiwe."
Modern izinkomishi zezingane sippy nge straws
Ngakho, liyini le-accessory ye? Modern utshani izinkomishi sippy nge ezahlukene ukuma ezikhangayo kanye nosayizi ezihlangene. Ngaphezu kwalokho, kukhona nezinye izinzuzo eziningi.
Okokuqala, izinkomishi sippy nge straws ngokuvamile ezenziwe ngezinto hypoallergenic futhi iphephile ngokuphelele. Okwesibili, anemisila izibambo ukhululekile kakhulu ukuthi uvumele ingane yakho ukuba kalula ukusebenzisa le-accessory ye. Okwesithathu, izinkomishi sippy kuyinto ngempela evulekile. Ngaphezu kwalokho, imibala egqamile futhi elikhanyayo ukuheha ngokucacile ukunaka kwanoma isiphi ingane.
I tube kufihliwe esebenzisa valve ngokuhambisa ezakhelwe-accessory yezingane. Lokhu kuvumela ukuvikela okuqukethwe ibhodlela ekutholeni iyiphi amagciwane noma uthuli.
Geza enjalo izinkomishi sippy noma yokugeza izitsha, noma ngesandla esebenzisa insipho ewuketshezi. Ngaphambi ukusetshenziswa, kumele engahashazanga ngamanzi agobhozayo.
A isipho esimangalisayo ngoba ingane
Phela, ngotshani izinkomishi sippy ukucindezelwa kwakuvame ukusetshenziswa njengezaba samanje ukuba ingane, isibonelo, at lokuzalwa yayo yokuqala. isipho esinjalo kungaba wusizo futhi kubaluleke kakhulu.
Into esemqoka akuyona batheleka ukuphuza isitsha ketshezi ashisayo - ngenhla 40 degrees. Lena bonke nje ngenxa yezizathu zokuphepha - ukuthi ingane kungaqali obzhogsya. imikhiqizo enjalo eyenziwe impahla equkethe bisphenol A, ngakho akusho bungakhiphi ezinobuthi lapho evuthayo.
Soft abicah tube ayikuvumeli imvuthu ubuhlungu umlomo. Ekupheleni kwalo kukhona ekhethekile engu- emise naikiweko, okuyinto kuvimbela ketshezi ethela enkomishini Element uma kwenzeka okunomthelela noma ekwindla. Emaphethelweni engezansi steel tube eyisidalwa esinenkululeko silinganiso. Kuyasiza ukulihambisa bebheke ukuthambekela inkomishi Element.
Ukuhambisa ikhava zokuzivikela is ngokuphepha nasezinsikeni esitsheni, ngoba bephonsa noma ukulahlekelwa akunakwenzeka. Okuhambisana onobuhle eziningi ngisho wayibhinca ekhethekile ehlombe, okwenza kube lula abaziphethe inkomishi Element. Nokho, design elikhanyayo kuyinto ehlukile ujabulele.
Into Kuyamangalisa Ukugunda
Ngakho, ukuphuza isitsha nge Izibuyekezo utshani eshiya uqobo omuhle kakhulu. Lokhu akusona isimanga, ngoba le-accessory Kuyinzuzo ezahlukene isisindo.
Uyoba kalula bakwazi ukondla ingane yakho endleleni ngenxa screw-cap. Ukuphuza isitsha kungenziwa zezikhali kalula futhi bahlanza. tube Soft ifakwe Isivalo esikhethekile ukuvimbela bechitha okuqukethwe. Kafushane, ngokuthenga le nto, uzoqaphela ukuthi singakanani kulungile.
Musa ngisho ukungabaza ukuthi ngeke uzisole ukuthenga le-accessory njengoba isitsha ukuphuza ne straw. "Avent", by the way, ingenye models ethandwa kakhulu. Ngokuvamile abazali ayeke bagxila le mfanelo. Nakuba ngokuvamile abantu abadala ukuwabuka onobuhle ezivela kwezinye abakhiqizi. Ngokwesibonelo, e-isitsha ukuphuza ne straw «Pigeon». Nokho, igama lenkampani akubalulekile kangako. Into esemqoka - izinga.
Ukukhetha isitsha ukuphuza ne straw, bheka, okokuqala kunakho konke, ukugxila ivolumu. Thenga ncamashi ukuthi elinjani elifanelekayo kakhulu ingane yakho.
Izindleko inkomishi Element nakanjani atholakalayo, ngoba ukukhokhela le-accessory can yimuphi abazali. Uma ingane yakho ifinyelele konyaka ubudala futhi uhamba kakade - ngale ndaba adingeka kuye. Thenga Phela, uma uthanda futhi kungenzeka tube esikhiphekayo.
Ethandwa kakhulu yokudla inkomishi
Ngakho, namuhla, le-accessory ingenye imikhiqizo eminingi athengisa phakathi izingane. Yiqiniso, ngoba kulula kakhulu ukusebenzisa futhi zikhululekile. Yena zezikhali kalula ibe izingxenye ezintathu. ngentambo Maholoholo ikuvumela ukuba uthole kalula kuwo, nge uvalwe elisontiwe akusho agobhoze.
Izibambo abe lula ethile. Abaningi babo kungaba zinamathele Indoda ehamba ngesihlalo sabakhubazekile usebenzisa kokubili isiqeshana. Isivali sivalekile tube babancwebe, uketshezi akusho ageleze ngoba, ngisho noma indebe ibele esimweni enezingqimba. By the way, vula yokudla inkomishi ingane siqu bengayi, kudinga amandla nangekhono. Into esemqoka ne nomzamo cap khama lize khaxa endaweni lapho ivaliwe.
Inkinga kuleli itjhubhu ukuphuza kuphela eyodwa - egeza polypropylene amashubhu. Uma kungenjalo isikhathi ukugeza (ikakhulukazi lapho kushisa), kungaba ngokushesha okukhulu zarosti yokuqhuma. It is bahlanza esebenzisa yensontfo ezimanzi wasonta, a kwaphoqa induku elincanyana.
Ngakho, indebe yokudla ne straw uyisibonelo esihle esakhiwe ngezinto ezinhle eqinile. Yena uphelele izingane omunye unyaka ubudala, futhi abazali babo nakanjani uyokwaneliswa.
Elingasebenzi abicah amashubhu zihlale isendalini. Kodwa, naphezu kweqiniso lokuthi abantwana abaningi namanje ukuluma, abasakwazi isikhathi eside buqinile. Isizathu wukuthi amashubhu kukhona tolsostennymi uqine.
Ngokuvamile, ukuphuza isitsha ne straw - ekahle ingane encane. Uyokwenza kuye sokujabulisa futhi bajwayele ukuzimela.
Kufika ukuthi mdala ukondla ingane nenye? ezenziwe
Nail Polish ku izipikili iDemo - amahle esisebenzayo